ကိုရီးယားဘာသာစကား - Page2of3- koreanlanguagestudy.com
မကြာမှီလက်ထပ်တော့မည့် မင်းသမီး Jeon Hye-bin
အသက် ၃၆ နှစ်ရှိမင်းသမီး Jeon Hye-bin သည် ဒီဇင်ဘာလ၏သတို့သမီးဖြစ်လာတော့မည်ဖြစ်သည်။ သူမ၏ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူ Panstars မှတတိယအကြိမ် Star News သို့ပြောကြားရာတွင် ယခုလ ၇ရက်နေ့တွင် "Jeon Hye-bin သည်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီတွင် မင်္ဂလာဆောင်မည်ဖြစ်သည်။" သတို့သားသည်Jeon Hye-bin ထက် အသက် ၂ နှစ် ပိုကြီးပြီး ကျော်ကြားသူမဟုတ်ကြောင်းသိရသည်။ Jeon Hye-bin သည်…
‌ဟော့ပေါ့ထဲရှိ ၀က်သားနှင့်အမဲသားစားသောတရုတ်လူမျိုးတို့၏ ဦး နှောက်တွင်ပိုကောင်များတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလတွင်တရုတ်နိုင်ငံ၊ Zhejiang ပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရှိဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားတစ် ဦး ဖြစ်သော Joo သည်ဝက်သားနှင့်အမဲသားများပါသော ဟော့ပေါ့စားသုံးခဲ့သည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Mr.Ju သည်ပြင်းထန်သောခေါင်းမူးခြင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီးဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်ဆင်တူသည့်လက္ခဏာများရှိခဲ့သည်။ အနီးအနားရှိဆေးရုံတစ်ခုတွင် ဦး နှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ သို့သော်ငွေများစွာမသုံးချင်သော Joo သည်အိမ်သို့ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော်မစ္စတာ Zhu ၏ရောဂါမှာ ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည် နောက်ဆုံးတွင်သူသည် Zhejiang တက္ကသိုလ်ဆေးရုံသို့သွားပြီး MRI စစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူ၏…
ခရီးတွေလည်းသွားပြီး ပိုက်ဆံလဲရှာချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ရမလဲ
ခရီးသွားပြီးပိုက်ဆံရှာဖို့ ကိုယ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုရှိသင့်တယ်လို့ ခရီးသွားစာရေးဆရာမ နာဘိုယောင်းကပြောပါတယ်။ ခရီးသွားရတာ လူတိုင်းရဲ့အိမ်မက်ပါ။လူတိုင်းနီးပါးကခရီးသွားရတာ နှစ်သက်ပါတယ်။ ဒါ့ထက် ခရီးလည်းသွားရမယ် ပိုက်ဆံလဲရဦးမယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါ။ဒါပေမယ့် ဒီလို လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အလုပ်ကတော့ လွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်ပါဘူး။ကိုရီးယား ခရီးသွားစာရေးဆရာမ 나보영 က သူမရဲ့ခရီးသွားခြင်းနဲ့ပိုက်ဆံရှာတဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ ကျမက ဝိုင်တွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ပက်သက်ပြီးကျောင်းပြီးထားပါတယ်။ကျောင်းပြီးတော့ မဂ္ဂဇင်းတိုက်တစ်ခုမှာ အလုပ်၀◌င်ခဲ့ပါတယ်။ ၆နှစ်လောက်လုပ်ပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ ဒီအလုပ်ကို စလုပ်ခဲ့တာပါ။ အစကခရီးတွေက ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ်သွားရတာပါ။…
ကိုရီးယား နာမည်ကျော်အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် ဂူဟာရာဟာ နိုဝင်ဘာ ၂၄ရက်နေ့မှာ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နားက စားပွဲမှာစာတစ်စောင်လဲရေးထားခဲ့တာကြောင့် ရဲတွေက သူမဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားတယ်လို့ ယူဆနေကြပါတယ်။ ဒီစာကိုလည်း ဟာရာရေး မရေးဆိုတာကိုလည်း ဆက်လက်စုံစမ်းသွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။သေဆုံးချိန်မှာ ဟာရာဟာ အသက် ၂၈နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ချောမောလှပအောင်မြင်နေချိန်မှာ ဘာလို့များအဆုံးစီရင်ကြတာလဲလို့ နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်။ သူမဟာ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ပုံတွေကို ရည်းစားဟောင်းက အွန်လိုင်းမှာဖြန့်မယ်လို့…
Galaxy fold ကိုပြသလိုက်တဲ့ Samsung
Samsung Electronics Co. , ၏ Galaxy Fold ကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောကုန်စည်ပြပွဲတွင်ပြသခဲ့သည်။ ကိုရီးယားနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးသည်ရှန်ဟိုင်းတွင်ကျင်းပသည့် China International Import Expo (CIIE) တွင်ခေါက်နိုင်သောပစ္စည်းသုံးခုကိုပြသခဲ့ပြီးသောကြာနေ့တွင်တရုတ်စားသုံးသူများထံမှ Galaxy Fold အားကြိုတင်မှာယူမှုများပြုလုပ်နေသည်။ Samsung ၏ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ ခေါက်နိုင်သောပစ္စည်းသည်တရုတ်ပြိုင်ဘက် Huawei ၏ Mate X နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီးနို ၀ င်ဘာ ၁၅…
Korea News တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံခြားသားအကြားနိုင်ငံတကာလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအရေအတွက်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၈.၅ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာကြောင်းအစိုးရသတင်းများကဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကနိုင်ငံတကာလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု ၂၃,၇၇၃ ခုရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၁,၈၅၆ ဦး မြင့်တက်လာသည်ဟုစာရင်းအင်းဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများအရသိရသည်။ တောင်ကိုရီးယားအစိုးရသည်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာထုတ်ပေးရာတွင်စည်းမျဉ်းများကိုတင်းကျပ်လိုက်သောအခါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုများသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်စတင်ကျဆင်းလာသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်တောင်ကိုရီးယား၌အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု၏စုစုပေါင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုစုစုပေါင်း၏ ၉.၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၂.၂၆၆၂၂ ရှိရာယခင်နှစ်ကထက် ၀.၉ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဗီယက်နမ်သတို့သမီးများသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအားလုံး၏ ၃၀…
Writing Test Answer [51~52] 다음을읽고ᄀ과ᄂ에들어갈말을각각한문장으로쓰십시오. (각10점) ㉠ 들을 수 있습니다. /들을 기회가 있습니다. /들을 수 있는 자리가 마련되어있습니다. ㉡ 연락/신청해 주시기바랍니다. / 연락해 주십시오. /말씀해 주시기바랍니다.  ㉠ 해주는 것이아니다…